Marketing amin'ny mpihaino Cross-Platform | Martech Zone
Talata, Aprily 1, 2014 Alatsinainy Martsa 31, 2014 Douglas Karr
88% an'ny Amerikanina no manana fitaovana Internet mifandraika amin'ny Internet farafahakeliny ary 2% ny Amerikanina mampiasa fitaovana maro manaraka ny tontolo andro. Ho an'ny mpivarotra, ity dia manome fanamby sy fotoana iray handrindrana sy hamenoana ireo media misy ny mpijery… sady manome toky fa hampiasa ny tanjaky ny fitaovana ampitan'izy ireo.
izany infographic avy any Uberflip mandinika ny zava-misy - izay demografika misy ny fitaovana, ny fotoana laniny amin'izy ireo, ary izay lazain'ny manam-pahaizana - hahafahanao mampifanaraka sy mampifanintontsintona ny paikadin'ny votoatin'ny findainao. Mandrosoa ary tohizo hatrany ny fikororohana ny fikarohana hitanay voalohany.
Tags: bill duggancross-sehatramulti-tasking fitaovanamultitasking fitaovanaGoogle +heidi cohenhaino aman-jery findayneal mohanfahitana amin'ny fahitalavitrauberflip
Leger Metrics: Tatitry ny Voice of Customer (VoC) azo ampiharina